iWatermark ye-iOS - uKhuseleko lweWatermark | Plum emangalisayo
iWatermark ye-iOS - uKhuseleko lweWatermark
Asanda: 8 / 21 / 19
IWatermark -Khusela iifoto zakho zedijithali kunye nomsebenzi wobugcisa
Ilizwe eli. I-1 ye-watermarking application ye-iPhone kunye ne-iPad. I-Stylisily watermark copyright yakho kwifoto ngemizuzwana. I-iWatermark yenzelwe kwaye yenziwa ngabafota. Jonga uphononongo kwiVenkile yokuSebenzisa ye iTunes.
Yabelana nge facebook
Yabelana nge Twitter
Uphengululo / I tutorials
Isixhobo esibalulekileyo sooManzi ekuSebenziseni ubuNgcali, iShishini kunye nokuZisebenzisa.
Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho kunye nevidiyo ngombhalo, umzobo, isiginesha, i-QR watermark, imethadatha kunye neewganographic watermark. Ukongeza i-watermark ebonakalayo kwimifanekiso ebonisa ukuba iyenziwa kwaye yeyakho. Ukujonga ukubonwa kubaluleke ngakumbi kwaye kufana nokusayina igama lakho emfanekisweni. I-watermark ibonisa ngobuqili, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho. Ukujonga amanzi kunokusetyenziselwa ukongeza i-imeyile, url, umyalezo wakho okanye imizobo emnandi kuyo nayiphi na ifoto okanye Pokemon Go umfanekiso okanye ividiyo.
Enkosi kubasebenzisi baka-1983 ***** 5 ukuphononongwa kwenkwenkwezi kwivenkile yeapp! Isixhobo esibalulekileyo sooManzi ekuSebenziseni ubuNgcali, iShishini kunye nokuZisebenzisa. Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngombhalo, imizobo, isiginitsha okanye i-watermark ye-QR. Ukongeza i-watermark ebonakalayo kwimifanekiso ebonisa ukuba iyenziwa kwaye yeyakho. Ukujonga ukubonwa kubaluleke ngakumbi kwaye kufana nokusayina igama lakho emfanekisweni. I-watermark ibonisa ngobuqili, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho. Ukujonga amanzi kunokusetyenziselwa ukongeza i-imeyile yakho, i-url, umyalezo wakho okanye iigraphics ezimnandi nakweyiphi na ifoto okanye umfanekiso wePokemon Go.
Yeyona App ibalaseleyo yokwenziwa kwezinto endiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kwi-iOS. "
-Terry White, uphononongo ku-sappappsite.com
Uphononongo lweVidiyo yiNkqubo yeDaily App:
Ndiyabulela kubo bonke abasebenzisi beWatermark ngezibuyekezo ezintle, ingxelo kunye neengcebiso.
I-iWatermark, sisixhobo ekuphela kwaso esiya kubona onke amaqonga ama-4 i-iPhone / i-iPad, iMac kunye neeWindows. I-iWatermark yeyona sixhobo sewatcharking esidume kakhulu kwiifoto.
Ukwabelana ngeendaba zeNtlalontle kwisisombululo esipheleleyo se-Facebook, Flickr, Instagram, Twitter, I-albhamu yekhamera, iklipboard okanye i-imeyile (iinketho ezi-3).
Q: Yintoni i-watermark?
A: Kumakhulu eminyaka eyadlulayo ii-watermark ziqale njengamanqaku okuchonga asetyenziswe xa kusenziwa iphepha. Ngexesha lokuveliswa kwephepha elimanzi kwagqinwa isitampu / uphawu. Indawo ephawuliweyo yahlala incinci kunephepha elijikelezileyo, ngenxa yoko igama le-watermark. Elo phepha, xa lomile kwaye labambelela ekukhanyeni, labonisa i-watermark. Emva kwexesha le nkqubo yasetyenziselwa ukuqinisekisa ubunyani bamaxwebhu asemthethweni, imali kwaye ngokubanzi ukukhusela ubuqhetseba.
Q: Isetyenziswa njani i-watermarking namhlanje?
A: Ukujonga ngedijithali lolona hlobo lwamva lwamanzi. Ngokufana nee-watermark ezibonakalayo ephepheni, ii-watermark zedigital zisetyenziswa ukubonisa umnini / umyili kunye nokuqinisekisa imidiya yedijithali njengemifanekiso, iaudio kunye nevidiyo.
Q: Kutheni Watermark?
-Ukuba iifoto / iividiyo zihamba viral zibaleka ngokungalunganga kuzo zonke iindlela. Rhoqo, ulwazi lomnini / ngumyili lilahlekile okanye alibale.
-Ukuphepha ukumangala ukubona iifoto zakho, imisebenzi yobugcisa okanye iividiyo ezisetyenziswa ngabantu, kwiimveliso zomzimba, kwiintengiso kunye / okanye kwiwebhu.
-Ukuphepha ukungqubana kwepropathi enobunkunkqele bokuthengiswa kwepropathi (i-IP), ukubiza okuneendleko kunye nentloko ebuhlungu evela kubagxeki abathi bebengayazi ukuba uyidalile ngokudibanisa ii-watermark ezibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo.
-Ukuba ukusetyenziswa okwandayo kweendaba zosasazo kuye kwandisa isivinini sokuba ifoto / ividiyo inokuhamba ngentsholongwane.
Q: Yintoni enokwenziwa?
Ing Ukongeza i-watermark ebonakalayo ngokungabonakaliyo, nokuba yeyiphi ifoto okanye ividiyo yakho, ukuba yeyakho.
✔ Ngalo lonke ixesha, i-watermark enegama, i-imeyile okanye url ukuze indalo yakho ibe nodibana okusemthethweni nokungabonakaliyo.
✔ Ukukhuthaza kunye nokukhusela inkampani, igama kunye newebhusayithi yakho ngokubheka zonke iifoto / iividiyo ozikhuphileyo.
Konke oku kungasentla kudale imfuno yesoftware ukukhusela kunye nokungqinisisa ubunini beefoto / zevidiyo.
* Bamba izijekulo.
** Cofa ukuhambisa indawo ye-watermark.
** Ukucofa / ukusondeza ukwandisa / ukuvumelana ubungakanani bewatchark.
** Iminwe emibini ngaxeshanye ukuze ijikeleze i-watermark kuyo nayiphi na i-engile.
* Ukulungiswa kwebatch (konke ngaxeshanye) okanye ngokulandelelana.
* Ukulungelelanisa ngokulula isilinganiselo seewatchark, opacity, font, umbala, ubungakanani, isikhundla kunye nekona.
* Yenza owakho isicatshulwa okanye isicatshulwa esibonakalayo okanye ukhethe kwimifanekiso ebandakanyayo (zombini isicatshulwa kunye nemizobo).
* Imizekelo ebandakanywayo zombini zizicatshulwa (amagama, imihla, idatha yedatha, njl.njl.) Kunye nemizobo (iisiginitsha, iilogo, njl. Njl.) Iimpawu zamachiza ezinokusetyenziswa ngokukhawuleza.
* Iifonti ezili-162 zeetekisi zakho zelizwi u-112 + 50 iifonti ze-Android.
* Ibonisa ifonti nganye.
* Iitermark ezingama-34 eziphakamileyo.
* Ngenisa ii-watermark zakho zemifanekiso ngokuthumela ngokwakho i-imeyile
* Iqhosha elinye ukungenisa utyikityo lwakho ukuze lusebenzise njenge watermark. * Gqibezela kwaye kulula ukuyiqonda incwadana yemigaqo.
* Yenza i-watermark ye-QR enjengebhakhowudi. Iikhowudi ze-QR zinokufikelela kwi-4000 chars yolwazi. Iikhowudi ze-QR emva koko ziya kufundwa kunye nesikena okanye i-smartphone kunye nosetyenziso oluchanekileyo olutyhila ulwazi olufakelweyo.
Khusela imifanekiso yakho
Ngama-Digitally sayina iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukwenza ibango, ukhuseleke kwaye ugcine ubunini bemveliso yakho kunye nodumo.
-Iifoto zihamba ngentsholongwane emva koko zibhabha kwihlabathi jikelele. I-watermark enegama, i-imeyile okanye i-url ukuze ifoto yakho inonxibelelwano olubonakalayo nolusemthethweni kuwe.
-Yakha uphawu lwenkampani yakho, ngokuba nelogo yenkampani kuyo yonke imifanekiso yakho.
-Khuthaza inkampani yakho, igama kunye newebhusayithi yakho usebenzisa iikhowudi zeQR njengee-watermark.
-Phepha ukumangaliswa kukubona iifoto zakho kunye / okanye umsebenzi wobugcisa kwenye indawo kwiwebhu okanye kwintengiso.
-Thintela ukungqubana, ukubiza imali eninzi kunye neentloko ezivela kubabhali abathi bebengazi ukuba uyidalile.
-Thintela ukuxabana kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (IP).
Q: Ndifuna ukuthoba isitampu sam njengombala wam watermark. Ndisongeza njani isitywina sam semifanekiso njengemizekelo, iPicasso, uBen Franklin, njl?
A: Sebenzisa isixhobo sethu sokutyikitya okanye wenze imizobo ye-.png kwikhompyuter yakho, uyithumele nge-imeyile, uvule i-imeyile kwisixhobo sakho se-Android kwaye ugcine kwi-albhamu yakho yemifanekiso. Kwi-iWatermark yenza i-watermark enemifanekiso kwaye ukhethe igrafu kwi-albhamu yakho yefoto ukuyongeza njenge-watermark entsha.
Q: Ngaba iyakusebenza ngeCanon, uSony, Nikon, uFuji, iOlimpus?
OKUBALULEKILEYOUkutyikitywa kukaJohn Hancock, uBen Franklin, uGalileo yimizekelo yee-watermark graphic. Zona zityikityo okwenyani kwaba bantu banembali. Zikhona njengemizekelo ukubonisa into enokwenzeka. Sicebisa ukuba wenze owakho utyikityo, uphawu okanye iikhowudi zekhowudi yeQR.
Nxibelelana nathi ukuba ufuna uncedo okanye unesiphakamiso.
I-Plum emangalisayo igxila ekwenzeni imveliso kunye nesoftware yeefoto zeMac OS, i-iOS, iWindows kunye neWindows. IPlum emangalisayo yinkampani yabucala ebekwe e-US kodwa ineeofisi kwilizwe jikelele. Phakathi kweemveliso zabo ezidumileyo yiCopyPaste ®, iKey, iClock ®, iWatermark®, iPixelStick, SpeechMaker kunye nePhotoMatte. IPlum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995.
-ubuyiselwe izixhobo zangoku zeapile kunye ne-os
-Ukutshintsha kwi-11 ye-iOS kubangele ukuba ii-chato zethegi, ezifana nophawu lwentengiso (™), ilungelo lokushicilela (©), uphawu lwentengiso olubhalisiweyo (®), umhla kunye nexesha, ukuba nzima ukufikelela, ngoku kumiselweyo.
-dityaniswe nge-xcode yamva nje
-ukubala. ukuphuculwa kokujongana komsebenzisi
-isebenza kakuhle kwi-11 XNUMX
-bukeka bukhulu kwi-iPhone X
- utshintsho oluncinci
-Kubandakanya «ibha yokuhamba kwitephu ukuskrolela yonke indlela ezantsi (iifoto ezintsha) nangaphezulu (ezindala).
- I-iOS 11, 10, 9 kunye ne-8; I-iPad / i-iPhone iyahambelana.
-ihlaziyiweyo ye-ios 11
-dityaniswe nge-xcode 9
-ulungelelanise umba kunye nokuvula iifoto kwezinye izixhobo usebenzisa isixhobo somfanekiso.
-banye abasebenzisi xa babona iqela leefoto zibonisa ukuba le nto ingafakwanga efowunini ifowuni yayingengomkhenkce. oko kuthatha ixesha ukuze songeze "Ukuhambisa ..." incoko yababini yenkqubela phambili ukwenza ukuba umsebenzisi azi ukuba yonke into ilungile kwaye alinde umzuzwana ukuze loo msebenzi awugqibe.
-dityaniswe kwaye yakhiwe nge-xcode entsha.
- ukuphuculwa okuncinci.
+ Lungisa: "Thumela i-waternarked foto kwi-Instagram" ngoku isebenza phantsi kwe-iOS9.
+ Lungisa: "Ngenisa ifoto" ulungelelaniso lweefoto.
+ Fixity: Ukuqhekezwa kwesiqalo ngelixa iifayile zewatchark.
+ Fixed: iOS8.3-iyahambelana ikhethi lefoto (entsha "PH" vs "AL" yakudala. "AL" isaxhaswe nge-iOS7)
+ Lungisa: Ukucima i-watermark kuya kutshintshela kwenye elandelayo.
+ Tweak: Ukukhetha "kombala" ngokuBukhoma ".
+ Tweak: Iipropathi ezilawulwa sisilayidi ezilawulwa sisilayidi ngexesha langempela,
njengohlobo olunye lwexabiso kwicandelo layo lokubhaliweyo elihambelanayo.
+ Fixed "Isicatshulwa esimeyile esineemilo ezininzi asibonisi umgca wokugqibela" bug.
iPhone / i-iPad kunye ne-Android
Enkosi ngokukhuphela iWatermark! I-iWatermark sesona sixhobo seqonga sithandwa kakhulu kwimifanekiso ebonwa ngamehlo. Iyafumaneka kwi IMac njengeWatermark Pro, Phumelela njengeWatermark, I-iPhone / i-iPad kwaye Android kakhulu. I-iWatermark ikuvumela ukuba wongeze i-watermark yakho okanye ishishini kuyo nayiphi na ifoto okanye imizobo.
Nje ukuba wongeze le watermark ebonakalayo uyila indalo kunye nobunini bale foto okanye umsebenzi wobugcisa. IWatermark ikuvumela ukuba wenze i-graphic, QR okanye i-watermark yombhalo emva koko uyihlele ukuze itshintshe i-opacity, ukujikeleza, umbala, ubungakanani, njl njl. Facebook, yaye Twitter. Yabelana ku Flickr nge email.
Uhlobo lwasimahla kunye oluhlawulelweyo
iWatermark usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Abantu abaninzi bazama le yasimahla kuqala ukuzama usetyenziso kunye neempawu. Inomfanekiso kunye nesimahla kwisibhengezo esiluhlaza. Ayinazikhangiso kwaye ikuvumela ukuba usebenzise zonke iimpawu kodwa yongeza ne-watermark yethu kwifoto nganye ethi, 'Yenziwe ngeWatermark Free'. Wamkelekile ukuba uqhubeke uyisebenzisa okanye uphucule kwi-app engahlawulelwayo engahlawulelwayo engenayo i-watermark yethu eyongezelelweyo. Ukuba ufumana ingxelo ehlawulelweyo cima esimahla.
iWatermark ijongeka ngoluhlobo. Le yinguqulo ehlawulweyo
Olu hlobo luhlawulelweyo luxhasa ukuvela okuqhubekayo kweWatermark. Ngalo lonke ixesha umntu ethenga ikopi ixhasa iinkqubo ezingakumbi zokuphucula usetyenziso olunceda wonke umntu. Yay! Inkqubo ehlawulwayo ayongezi watermark kwifoto yakho yeyakho kuphela. Ukuthenga ingxelo eqhelekileyo kuxhasa umsebenzi wethu wokuqhubeka kule app. Enkosi!
OKUBALULEKILEYO: Remember susa ingxelo yasimahla emva kokuthenga. Ingakukhathaza kwaye awusayifuni.
Ukuba uthanda ukuphuculwa okuqhubekayo kwaye ufuna ukuqhubeka, nceda ungenise uphononongo lwevenkile yeApp kunye / okanye wazise abahlobo bakho (ngakumbi abafoti) ukuba bayazazi iapp. Ukukhankanywa ngokulula nguwe kuFacebook, kuTwitter, kwiPinterest ye-Instagram, njl njl kunokunceda umntu athathe isigqibo sokuyikhuphela esinceda ukuba siqhubeke siyiphucula. Siyakuthanda ukuva kuwe. Enkosi Enkulu!
BALULEKILE: Ngaba ungathanda iifoto zakho ezihlanjelweyo zibonwe ngabantu abaninzi? Landela iWatermark (@Twitter, @Facebook, @Instagram, @Pinterest, njl. njl. njl. kwaye ubeke umzobo wakho wobugcisa #iWatermark oza kufakwa!
Like us on Facebook Iikhuphoni, iindaba, ukubuza imibuzo, ukuthumela iifoto zakho ezihlaziyiweyo.
Enye isoftware yePlum emangalisayo
IMac / Win: Ukuba ungathanda ukuvavanya isoftware yethu yeMac okanye iWin, yiza kwindawo yethu ukhuphele simahla ukuzama. Nika iClock ukuzama kubalulekile / kuluncedo / kumnandi kwaye amaxesha angama-100 angcono kunewotshi endala ye-Apple.
Ngolwazi oluthe kratya kwiMac okanye kwiinguqulelo ezi-Win Cofa apha.
iOS / Android: Emva kokusebenzisa iWatermark inyathelo elilandelayo ukuya kwi-iWatermark +. Ukuba ungumfoto we-pro okanye umsebenzisi onzima we-Instagram, Pinterest, okanye i-Twitter uza kuyifumana i-iWatermark + ibaluleke kakhulu. Zama iWatermark + uhlobo lwasimahla Apha. Ukufumana isishwankathelo sazo zonke izakhono zokujonga incwadana yeWatermark + Apha. Njengomnini weWatermark ungayiphucula nge- $ 1.99 (ngeli xesha) ngokuya ngqo kwivenkile yeapp ukufumana isixa se- $ 3.99 ke ukuba ubhatalele i-iWatermark yoqobo (i-1.99) ekhutshwa ngokuzenzekelayo yi-Apple xa uthenga isisi esikhokelela kwiindleko zokuphucula kuWatermark + nje nge- $ 1.99.
IWatermark + iyamangalisa kakhulu. Ndingayitsho le nto kuba ndibhale incwadana kwaye khange ndiyenze inkqubo. Ndisebenzisa zombini iWatermark kunye neWatermark + ngalo lonke ixesha emsebenzini wam nasekuzonwabiseni. Sukucinga okomzuzwana ukuba zonke izixhobo zokubhengeza ziyafana. IWatermark yeyona ilungileyo. Kodwa inyathelo elilandelayo yiWatermark + eyahluke ngokupheleleyo kwaye inamandla amakhulu. Kukho isixa esikhulu senkqubo kwi-app. Ujongano lomsebenzisi lujongwe kakuhle ngendlela abafoti abasebenza ngayo. Sukuthatha igama lam, jonga ngezandla or zama iinguqulelo zasimahla zeWatermark + njengoko wenzile kwiWatermark yasekuqaleni.
Nceda imeyile xa unengxaki. Ukubeka uphononongo lwenkwenkwezi e-1 kunye nokubhala isikhalazo ayisiyiyo uphononongo kwaye akuncedi ukusombulula ingxaki. Iinstead yokubeka uphononongo olungelulo uphononongo kodwa umnxeba woncedo, usithumelele i-imeyile ngokuthe ngqo kwaye sinokucoca izinto ngokukhawuleza nokuba yiphutha okanye ukungaqondani. Iinkcukacha kunye noncedo lwe skrini. Siyathanda ukuthetha nani nonke kwaye sisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba wonke umntu wonwabile. Enkosi.
Utshintsho lweNguqulo iOS
Utshintsho lweNguqulo for Android
Enkosi ngokukhuphela iWatermark! I-iWatermark sesona sixhobo seqonga sithandwa kakhulu kwimifanekiso ebonwa ngamehlo. Iyafumaneka kwi IMac njengeWatermark Pro, Phumelela njengeWatermark, I-iPhone / i-iPad kwaye Android naye. IWatermark ikuvumela ukuba ungeze i-watermark yakho okanye ishishini kuyo nayiphi na ifoto okanye umzobo. Nje ukuba wongeze le watermark ebonakalayo uyila indalo kunye nobunini bale foto okanye umsebenzi wobugcisa. IWatermark ikuvumela ukuba wenze i-graphic, QR okanye i-watermark yombhalo emva koko uyihlele ukuze itshintshe i-opacity, ukujikeleza, umbala, ubungakanani, njl njl. Facebook, yaye Twitter. Yabelana ku Flickr nge email.
Kukho iinguqulelo ezimbini ze-iPhone / i-iPad / i-Android: iWatermark yasimahla kunye neWatermark. Umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba iWatermark yasimahla ibeka i-watermark encinci ethi 'iWatermark yasimahla -Nyusa ukususa le watermark' emazantsi omfanekiso. Kwinguqulelo yasimahla iqhosha lokuhlaziya kuhlobo oluqhelekileyo likwiphepha eliphambili. Uninzi luya kuyifumana ilungile, kungenjalo kukho uhlaziyo olungabizi kakhulu lokususa loo watermark. Ukuphucula kuxhasa ukuvela kweWatermark, ixabiso layo elincinci lenkqubo ephucukileyo.
IWatermark iza nemizekelo yokubhaliweyo (amagama, imihla, njl.njl.) kunye nemizobo (iisiginitsha, iilogo, njl. njl.) Iimpawu onokuzisebenzisa ngokukhawuleza ukuvavanya iWatermark. Kodwa kungekudala uyakufuna ukwenza ii-watermark, isicatshulwa okanye imizobo. Amanqaku okubhaliweyo onokuwenza ngokuthe ngqo kwiWatermark kwaye ugcinwe ukuphinda usetyenziswe. Iimpawu zokubonisa imizobo, njengotyikityo okanye iilogo, zinokungeniswa kwelinye ilizwe:
Ngokusebenzisa isixhobo seSiginitsha / seFoto Scanner esifumaneka ngokukodwa kwi-iWatermark. Esi sixhobo sikuvumela ukuba uthathe ifoto yokutyikitya kwakho okanye imizobo, uyithumele ngaphakathi kwaye yongeza ukungabonakali kwimvelaphi ukuze uyisebenzise njengewatchark.
Ngokusebenzisa ikhompyuter yakho (bona FAQ ngezantsi kwiinkcukacha ezingaphezulu) kwaye emva koko uzithumele i-imeyile, kwisixhobo sakho se-iOS gcina ifayile eqhotyoshelweyo kwilayibrari yemifanekiso. Kanye kwithala leencwadi ungasebenzisa le mifanekiso (njengawe ungayitywina okanye ilogo) xa usenza i-graphic watermark.
OKUBALULEKILEYOI-iWatermark kuphela ii-watermark ikopi yeefoto zakho. Soze itshintshe ifoto yoqobo. Soloko uqinisekisa ukugcina iifoto zakho zoqobo.
Sayina ngokwedijithali iifoto zakho / umsebenzi wobugcisa kunye neWatermark ukubanga, ukukhusela nokugcina ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nodumo. Yakha uphawu lwenkampani yakho, ngokuba nelogo yenkampani kuyo yonke imifanekiso yakho. Kuphephe ukumangaliswa kukubona iifoto zakho kunye / okanye umsebenzi wobugcisa kwenye indawo kwiwebhu okanye kwintengiso. Kulumkele ukungavisisani kunye nentloko kunye nababhali ababanga ukuba abazi ukuba uyidalile. Kulumkele ukumangalelwa ngeendleko ezinokubakho kwezi meko zokusetyenziswa gwenxa kwe-ip. Kulumkele ukuxabana kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda.
1. Yenza i watermark. Thatha okanye usebenzise umfanekiso oza kuwusebenzisa njengomqolo ongasemva ukwenza i-watermark nokuba kukwisicatshulwa okanye kwigrafiki. Yenza isicatshulwa okanye iWatch watermark. Gcina loo watermark.
2. Ukujonga umfanekiso. Thatha okanye ukhethe ifoto uze ukhethe kwi-watermark roller ye-watermark oyenzileyo.
3. Gcina kwaye / okanye wabele.
-Kwiifoto ezikhutshiweyo ze-iPhone / iPad zingena kuLuhlu lweKhamera nakwifolda 'yeWatermark'.
-Kwiifoto ezi-watermark ze-Android yiya 'kwiiWatermarked Imifanekiso' kugcino lwangaphandle.
Khetha kulunyulo lwee-watermark ezibandakanyiweyo (zombini isicatshulwa kunye nemizobo) okanye ukongeza owakho umbhalo okanye i-graph watermark. I-watermark yakho ehlengahlengisiweyo inokuba sisicatshulwa, uphawu lweshishini okanye utyikityo lwakho kwaye unako ukuhlengahlengisa ngokulula ubungakanani bayo, opacity, font, umbala kunye ne-engile. Emva koko kwi-watermark roller khetha enye yemizekelo yethu okanye eyakho kwaye ngokukhawuleza watermark nayiphi na ifoto.
Gcina kwilayibrari yakho yezithombe okanye wabelane nge-Facebook / Twitter / Flickr okanye i-imeyile kwizisombululo ezahlukeneyo.
1. Yenza i-watermark (umzobo okanye isicatshulwa okanye i-QR).
2. Ukujonga imifanekiso.
OKUBALULEKILEYO: Ungaphazami ngokwenza i-watermark yokwenzela i-watermark.
Zombini ezi zinto zingentla kufuneka uqale ngokukhetha okanye ukuthatha ifoto.
Emva koko ukuba ukhethe ifoto kwaye ibe yintsingiselo yesikrini esikhulu ngoku unqakraza naliphi na amaqhosha amathathu asezantsi:
'iWatermark Ifoto (s)'Ukujonga ifoto usebenzisa i-watermark okanye eyakhelwe ngaphakathi
'Yenza i-Watermark yokubhaliweyo(ayenzi watermark ifoto)
'Yenza i-Graphic Watermark(ayenzi watermark ifoto)
Imifanekiso yeWatermark (s)
Ukucofa eli qhosha kuya kukuthatha kwiphepha le-Watermarking. Apha unokucofa kwimenyu esezantsi kwiphepha leMifanekiso, ii-roller ziya kulayitetha ukhethe enye yamamaphepha amaninzi okanye iiwatchark zakho. Nje ukuba ukhethe enye uya kuyibona kwifoto yakho. Cofa kwifoto okanye kwimenyu ye-watermark ukuze i-roller inyamalale. Ngoku sebenzisa ukubamba ukuze ulungelelanise i-watermark:
Ngomnwe wakho cofa kwi-watermark ukuze uyijikeleze ephepheni.
Sebenzisa ipinki / ukusondeza ukuze wandise / usebenze ubungakanani bewatchark.
Chukumisa iminwe emibini ngaxeshanye kwaye ujikeleze ukuze ujikeleze i-watermark.
Ukubetha ugcine kwaye kugcina ikopi yelo foto naloo watermark ikuyo kwilayibrari yemifanekiso okanye ungabelana nge-imeyile, facebook, njl njl.
OKUBALULEKILE: ungayitshintsha indawo, indala kunye nobukhulu kodwa awuyi kuba nakho ukutshintsha i-opacity, font, okanye umbala. Ukutshintsha ezo zenza i-watermark entsha nangayo nayiphi na yezo zinto uyifunayo.
Yenza i-Watermark yokubhaliweyo
Kuqala khetha ifoto njengemvelaphi ukunceda ukuyila nokujonga i-watermark yakho. Uya kudala kwaye ugcine i-watermark yokusebenzisa kamva ingekuko ukujonga umfanekiso.
Nje ukuba ukwenze okubhaliweyo kwiWitermark iphepha uya kubona imenyu entsha ngezantsi ngasekhohlo ebizwa ngokuba nguHlela. Cofa oko kwaye phezulu uzakubona imenyu yento Umbhalo, ucofe oko. Kule ncoko yencoko yababini yento oyifunayo, igama lakho. Nje ukuba wenze ukukhetha naziphi na ezinye amaqhosha oHlelo lweemenyu ukutshintsha isilinganiselo, opacity, font, umbala kunye / okanye i-angle ukuze uhlengahlengise ukuthanda kwakho.
Sebenzisa amaqhosha kwimenyu yokuhlela ngezantsi ngasekhohlo ukutshintsha ifonti, i-engile, isikali, opacity, njl.nokuwenza ngokuchukumisa ngeendlela eziqhelekileyo ze-iOS:
Ukuhambisa i-watermark yichukumise kuphela ngomnwe wakho kwaye uyitsale naphi na apho ufuna.
Cofa kwiqhosha le-angle ukuze utshintshe i-angle okanye ubeke iminwe emibini kwi-watermark kunye ne-twist yokutshintsha i-angle.
Ukutshintsha ubungakanani sebenzisa i-pinch eqhelekileyo okanye ukusondeza ukwandisa / ukuqina ubungakanani befonti.
Kwindawo yokubhaliweyo ungachwetheza kwibhodi yezitshixo kwaye ukhethe oonobumba abakhethekileyo njengo ©, ™ no ®. Kananjalo umhla kunye nexesha zinokongezwa kwi-watermark.
Khetha enye yeefonti ezili-150 ezikhoyo kwiWatermark. Okubhaliweyo kunye nefonti kubonisiwe kubuso befonti uqobo, i-wyswig (into oyibonayo yile uyifumanayo, bona ngezantsi).
Guqula i-engile ngokusebenzisa imenyu yokuhlela okanye ngokubeka iminwe emibini kunye nokujija (hayi umdaniso wama-60 kodwa isenzo sokuchukumisa).
Yenza i-Graphic Watermark
KwiiWatchmark Watermark ungasebenzisa nayiphi na imizobo kodwa kufanelekile ukuba ibe yimizobo enemvelaphi ebonakalayo. Isayinitsha yesampulu, iisimboli kunye neminye imizobo esiyibandakanyayo inemvelaphi ebonakalayo kunye neefayile ze-.png. Oko kuthetha ukuba utyikityo ngokwalo luyabonwa kodwa imvelaphi iyabonakala kwaye ibonisa ifoto ngaphantsi. Ifomathi yefayile yokwenza oku ibizwa ngokuba yi -png kwaye ivumela imvelaphi ukuba icace gca (a .jpg ayikuvumeli ukungafihli, .png kufuneka kusetyenziswe).
Khangela FAQ (ngezantsi) okanye iGoogle 'png' kunye 'nokubonakala' ukuze ufunde okungakumbi ngokwenza iifayile ze-png ezinemvelaphi ebonakalayo.
Kukho iindlela ezi-3 zokufumana le mizobo yangasemva ebonakalayo kwi-iWatermark yokusebenzisa iiwatchark. Unako nokuba
1. Fumana umfanekiso we-png ocacileyo kwiwebhu ngokukhangela. Chukumisa ubambe igrafu
2. Sebenzisa eyakhelwe kwisixhobo iWatermark Scan Signature / Graphic okanye
3. Yenza ifayile ye-.png yokutyikitya / umzobo kwikhompyuter yakho, uyithumele nge-imeyile uze uyingenise kwiifoto zakho.
1. Fumana umfanekiso we-.png kwiwebhu.
Fumana umfanekiso we-png ocacileyo kwiwebhu ngokukhangela. Chukumisa ubambe igrafu ukuyigcina kwi-albhamu yekhamera. Oku kusebenza kwi-iOS kunye ne-Android.
2. Utyikityo lweWatermark / Isikena seGrafiki
Esi sisixhobo esikhethekileyo esisenzileyo ngokukodwa ukungenisa iisayinithi zakho kunye nobugcisa ukuze ungafundi ukwenza oku kwikhompyuter yakho. Kuqala tyikitya utyikityo lwakho ngepeni emnyama (usebenzisa into etyebileyo emva koko usiba kwaye incinci emva koko isiphawuli somlingo sihamba phambili) kwiphepha elimhlophe kakhulu. Emva koko khetha Yenza i-Graphic Watermark kwiphepha eliphambili emva koko ukhethe utyikityo lokuSayina.
Nje ukuba uyenze loo nto iya kuvula ikhamera ukuba ithathe ifoto. Ke ngokukhanyisa okuhle ngaphandle kwezithunzi thabatha ifoto yomsayino wakho. Ungagcwalisa isikrini ngokusayina kwakho. Ukuba ijongeka intle iqhosha lokuSebenzisa kwaye iya kuthi kwangoko yongeze ubala kwimvelaphi yesiginitsha yakho kwaye ungenise kwaye uyibeke ngaphezulu kwayo nayiphi na ifoto oyikhethileyo ekuqaleni. Ngoku ngokunqakraza kwimenyu 'Hlela' yemenyu unokutshintsha i-opacity, i-angle, isikali ngeendlela eziqhelekileyo. Xa ugcina, iya kugcina utyikityo lwakho njengew watermark onokuyisebenzisa nanini na. Kuya kufuneka wenze oku amaxesha ambalwa ukuze ufumane ngokuchanekileyo. OKUBALULEKILEYO: Oku akuthethi ukuba uyayijonga loo foto. Lesi sithombe sinemvelaphi kuphela ngexesha lokudala i-watermark. Nje ukuba wenze kwaye ugcine i-watermark emva koko ungayisebenzisa nakweyiphi na ifoto kwixa elizayo.
Ukongeza kwi-asayinimenti yokuskena, iisiginitsha zeskena zingasetyenziselwa ukungenisa iigraphics ezilula zokuphakama okuphezulu.
Lo mfanekiso ungezantsi yinxalenye ka- isifundo esenziwa ngumfoti uMark IAlberhasky.
3. Yenza i-Graphics kwi-Mac yakho okanye kwi-Win yeKhompyuter, kwi-imeyile, emva koko Vula kwi-iWatermark.
Yenza imifanekiso ekhompyutheni yakho usebenzisa i-Photoshop, iGimp okanye enye yee-eiditors. Nalu ulwandiso lwamanyathelo okwenza umzobo nge-alpha mask ekwabizwa ngokuba kukucaca.
a. Yenza imizobo ebonakalayo.
1) Yenza ungqimba kwaye uzobe ikhabethe kuyo (okanye umane unamathisele)
2) Ukujikeleza kobugqi yonke imvelaphi ofuna ukungafihlisi kuyo. Emva koko betha ukucima. Ushiyeke ngemvelaphi yebhodi yokujonga. Ukuba awuyiboni ibhokisi yokujonga (akukho mvelaphi) emva koko kunokubakho ezinye iileya ekufuneka uzifihlile okanye uzicime.
3) Gcina njengePNG. Elubala alunakwenziwa nge .jpg kufuneka ibe yifayile ye .png. Oku ikhonkco Iinkcukacha ezithe kratya malunga nokwenza oku. apha zintlanu iindlela zokwenza oku. Unokuya nakwaGoogle wenze utyikityo olunemvelaphi ebonakalayo ukuze ufumane ulwazi ngakumbi.
b. Dlulisa imizobo ukusuka kwikhompyuter yakho ukuya kwisixhobo sakho se-iOS okanye se-Android
Ukusuka kwi-imeyile yakho yekhompyuter .png kuwe. Vula kwi-iPhone yakho / i-iPad okanye i-Android kwaye uza kubona into enje.
Chukumisa ubambe umzobo owuthumeleyo. Kule meko i icon yayo yeKey. Oko kuyakuvela kwincoko yababini engezantsi. Cofa kwiqhosha elithi "Gcina kuKhamera".
Kwimizobo ye-Android kwakhona ingabekwa ngqo kwi-sdcard / iWatermark / ifolda yeWatermark kwaye emva koko isetyenziswe kwi-iWatermark.
c. Ngenisa kwiWatermark
KwiWatermark chukumisa imenyu yokuHlela ezantsi kwesikrini. Kwimenyu ethi pops up touch 'Image' iqhosha (jonga ngezantsi) fumana umfanekiso owugcinileyo kwikhamera kwaye iya kungeniswa ngaphakathi kwaye ivele njengewatch kwifoto. Unokufuna ukutshintsha i-opacity yayo ukuze ibonakale ngakumbi.
Umzobo we icon ye-iKey unokuba sisiginitsha yakho, uphawu lwayo okanye enye imizobo ngoku eyi-watermark yakho. Nje ukuba ungenise i-watermark yakho yemifanekiso ungathatha inxaxheba kuyo naziphi na izinto kwimenyu yokuhlela kwicala lasekhohlo / ezantsi kwesikrini.
Ukutshintsha isikali sebenzisa isikhonkwane esiqhelekileyo okanye ukusondeza ukwandisa / ukuguqula ubungakanani befonti.
Yenza i-QR Watermark
Yintoni ikhowudi yeQR? I-QR ithetha ukuphendula okukhawulezayo kunye nohlobo lwebhakhowudi enokugcina ulwazi oluninzi. Funda ngakumbi kwi Wikipedia. IWatermark ye-iPhone / i-iPad ikuvumela ukuba usete imigca emininzi yomhla kwikhowudi yeQR enokuthi isetyenziswe njengewatch. Ii -apps ezininzi kwi-iPhone zinokucacisa (ukuskena kunye nokufunda) iikhowudi ze-QR, enye yi-iPhone yalatha nje ikhamera kwikhowudi ye-QR kwaye iya kubonisa i-url kwaye ibuze ukuba uyafuna ukuya kula makhonkco. Ukufumana ngakumbi kwiVenkile yeApple iTunes kwibhokisi yokukhangela uhlobo 'lwekhowudi yeQR' ukufumana iiapps ezichaza iikhowudi zeQR. I-Android ine-app eza njenge-app emiselweyo efunda iikhowudi ze-QR ezibizwa ngokuba 'yiBhakhowudi yeSkena'. Yinto elungileyo kuba xa idibana ne-URL kwikhowudi ye-QR ivula isikhangeli kwaye ikuse ngqo kwindawo leyo.
Yintoni ikhowudi ye-QR njenge-watermark efanelekileyo? Ngoku, endaweni yokungabikho kolwazi kwifoto yakho unokuba nolwazi oluchanekileyo malunga nawe okanye ishishini lakho elinokuthi liskenwe ngokulula yi-app efanelekileyo kwi-smartphone. Akukho sidingo sokuchwetheza kwiwebhusayithi ukuskena kuphela kwaye iya kuya phaya kwisikhangeli sayo. Ikhowudi ye-QR njenge-watermark kwifoto inokwenza izinto ezininzi:
Qhagamshela iwebhusayithi yakho. Faka i-URL yewebhusayithi yakho (umzekelo: https://plumamazing.com). Iiapps ezinokuskena emva koko ziye ngqo kwindawo yakho.
Faka igama lakho, idilesi, i-imeyile, iwebhusayithi, njl. Njl... Ukuze abantu bazi ukuba le yindalo yakho, ifoto yakho, impahla yakho yobuchule.
Banokuthumela nge-imeyile, baphendule okanye mhlawumbi bathenge umsebenzi wakho.
Izinto ezininzi esingakhange sicinge ngazo okwangoku
Uyakha njani ikhowudi ye-QR kwiWatermark.
Landela 'yenza i-watermark yemizobo' (ngentla) khetha iKhowudi ye-QR kwicala lasekhohlo le-EDIT imenyu (jonga umfanekiso ongasentla). Ngenisa idatha ofuna ukuyifaka. Emva koko betha GENERATE iqhosha. Iya kudala kwaye ifake ikhowudi ye-QR. Gcina oku ngegama elifanelekileyo. Ngoku nangaliphi na ixesha ufuna le khowudi yeQR ingasetyenziselwa ukubekisa ifoto. Nje ukuba wenze ikhowudi ye-QR kulungile ukuyivavanya.
Ukucima i-watermark nako kulula. Khetha ifoto okanye uthathe enye.
Ye-iPhone / i-iPad-khetha iqhosha lokwenza i-Watermark yokubhaliweyo okanye i-Graphic Watermark. Emazantsi kwesikrini khetha i-Watermark yokukhangela ithebhu emva koko kwi-roller pops up khetha i-watermark ofuna ukuyicima kwaye ucofe iqhosha elibomvu ngo-kuyo.
Kwi-Android-khetha iqhosha lokwenza i-Graphic Watermark. Emazantsi kwesikrini khetha i-Watermark yokukhangela ithebhu emva koko kwi-roller pops up khetha i-watermark ofuna ukuyicima kwaye ucofe iqhosha elibomvu ngo-kuyo.
Gcina kwaye wabelane
Xa ubetha iqhosha lokugcina ngezantsi ngasekunene emva kokubheka umfanekiso incoko yababini ngasentla iyavela. Nantsi:
Gcina kwiThala leeNcwadi.
I-imeyile kumgangatho opheleleyo kunye nobungakanani. (I-imeyile ifumaneka kuphela ukuba usete i-imeyile ephumayo kwisixhobo sakho se-iOS)
Thumela i-imeyile ngomgangatho omncinci kunye nobukhulu obuncinci.
Thumela i-imeyile kwinqanaba elincinci kwaye lincinci elincinci kodwa elisajongeka lihle kwiwebhu.
Ngenisa kwi yakho Facebook akhawunti.
Ngenisa kwi Twitter
Khetha iifoto okanye iifoto ezininzi
Ukufikelela kwiifoto kufuneka kuvulwe. Ukuqinisekisa ukuba oku kuvuliwe:
I-iOS 6 yiya kuseto: izinto zabucala: iifoto kwaye ubeke iswitshi ukusebenzisa iMifanekiso.
IOS 5 yiya kuseto: imfihlo: iinkonzo zendawo: kwaye uqiniseke ukuba iWatermark ivuliwe. Asisebenzisi idatha yendawo kodwa oku kufuneka kuvulwe ukuze kukhethwe izinto ezininzi ukuze zisebenze.
Imifanekiso yeBatch Watermarking
Khetha ngaphezulu emva koko ifoto enye ukuqala njengakwisikrini esingentla. Cofa iqhosha elithi 'Kwenziwe' emva koko kwiscreen esikhulu khetha iqhosha leWatermark kwaye ukhethe enye yakho okanye iiwotshi zethu. Emva kokuba wabelana (gcina kwii-albhamu okanye kwi-facebook, njl.njl.
Ukubeka indawo yokujonga amanzi
Sebenzisa iqhosha lokumisa kwindawo ukubethelela iiwindows kwindawo enye kwifoto nganye. Cofa iqhosha lesikhundla kwiNqaku okanye iiMifanekiso zeMifanekiso kwaye uya kufumana incoko yababini ngaphezulu. Khetha indawo ethe tyaba kunye nendawo ethe nkqo (njengekhohlo, phezulu) ukubeka i-watermark kwindawo enye ngexesha ngalinye kwiifoto ezizodwa okanye iifoto zebatch.
Isixhobo sesikhundla sibaluleke ngakumbi xa unefoto ezininzi ukuya kwinkqubo yeebatch, ezohlukeneyo zokukhokela (umzobo okanye imbonakalo yomhlaba) okanye isisombululo esahlukileyo kwaye ufuna i-watermark ibonakale kwindawo enye kwilinye.
Q: Yintoni umahluko phakathi kweWatermark Simahla kunye neWatermark zombini kwi-iPhone / iPad?
A: Umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba iWatermark yasimahla ibeka i-watermark encinci ethi 'iWatermark yasimahla -Nyusa ukususa le watermark' emazantsi omfanekiso. Kwinguqulelo yasimahla iqhosha lokuhlaziya kuhlobo oluqhelekileyo likwiphepha eliphambili. Uninzi luya kufumanisa ukuba lwanele. Ngaphandle koko nyusa ukususa loo watermark. Ukuphucula kuxhasa ukuvela kweWatermark, ixabiso layo elincinci lenkqubo ephucukileyo.
Q: Nguwuphi umahluko phakathi kweWatermark kwi-iOS ne-Android?
A: Hayi kakhulu sisebenzisa incwadi efanayo. Inguqulelo ye-Android igcina iifayile kwindawo eyahlukileyo. Impendulo ikwi-Q & A elandelayo.
Q: Ndigcinile kutheni ndingayifumani ifoto yam eneseti?
A: Ezi zinto zimbini ezahlukileyo zokugcina (2) i-watermark okanye (1) ifoto enamanzi. Musa ukudibanisa enye kwenye.
1. Vula ifoto, wenze isicatshulwa okanye i-graph watermark emva koko ugcine kuphela i-watermark.
2. Vula ifoto, yongeza i-watermark egciniweyo, i-watermark ifoto emva koko ugcine iifoto ezinamanzi.
Xa wenze u-1 (apha ngasentla) unokuba ubudidekile kuba xa usenza i-watermark ufaka umfanekiso kuqala ukuze ubone ukuba iza kubonakala njani i-watermark kwifoto. Xa uyigcina igcina i-watermark osandula ukuyila hayi ifoto. I-watermark igcinwa kwikholamu yekhamera apho inokuphinda isetyenziswe ngalo naliphi na ixesha.
I-1 ikuvumela ukuba wenze ii-watermark ezahlukeneyo onokuthi emva koko ukhethe naliphi na ixesha kamva ukubukela iifoto ze-watermark ngokulula.
2 Ngokwenyani ukugcinwa nokugcinwa kwefoto evaliweyo.
QIphi indawo ye-Android egcina kuyo iifayile.
A: Xa uqala inguqulelo ye-Android ibeka incoko yababini ethi, “Ingcebiso eluncedo: Iifoto ezinamanzi kusetyenziswa le app zigcinwa ngaphakathi kwifolda ebhalwe 'iWatermarked Images' kugcino lwangaphandle. Ungafikelela kuzo usebenzisa usetyenziso lwefayile okanye usebenzise igalari ”.
Q: Nguwuphi umahluko phakathi kweWatermark ye-iPhone / i-iPad kunye neenguqulelo zedesktop ye-Mac / Win?
AIinguqulelo zedeskithophu zithatha ithuba lokuqhubekisa ngokukhawuleza kunye nomboniso omkhulu. Iinguqulelo zedesktop zinobuchule obungakumbi, ziyakwazi ukuphatha iifoto ezinkulu kakhulu kwaye kulula ukuzisebenzisa kumakhulu okanye amawaka eefoto kwiifoto zokuhamba komsebenzi. Inguqulelo ye-iPhone / ye-iPad yenzelwe ukukuvumela ukuba usebenzise touch ukutshintsha iiparameter ezahlukeneyo. Zombini zenzelwe ukulingana nezixhobo zazo. Ukufumana ngakumbi apha iWatermark Pro ye-Mac kwaye iWatermark ye-Win. Njengathi kwi-Facebook ukufumana iindaba kunye nesigqebhezana esikhethekileyo sesaphulelo seMac okanye i-Win version.
QKutheni le nto ndifanele ukubukela iifoto endizibeke kuFacebook, Twitter, Instagram, Tumblr, njl.
AUmbuzo oqaqambileyo! Kuba zonke ezo nkonzo zisusa imethadatha yakho kwaye akukho nto ikubambeleyo kule foto. Abantu banokutsala umfanekiso wakho kwiidesktop zabo kwaye babelane nabanye kude kungabikho nxibelelwano kuwe kwaye akukho lwazi kwifayile ethi uyidalile okanye yeyakho. I-watermark iqinisekisa ukuba wonke umntu ucacile kwinto yokuba ifoto ye-IP yakho (impahla yelungelo lokuqonda). Awusoze wazi ukuba ifoto oyithathileyo iya kuba yintsholongwane. Lungela.
QNgaba iWatermark Pro igcina ifoto kwisisombululo esiphezulu kwi-albhamu yemifanekiso?
A: Ewe, iWatermark ye-iPhone igcina kwisisombululo esiphezulu kwi-albhamu yezithombe. Ingakubonisa isisombululo esincitshisiweyo somboniso wakho ukuphucula isantya kodwa imveliso yokugqibela ilingana negalelo. Unakho kwakhona ukuthumela ii-imeyile zemifanekiso eqingqiweyo ngqo kwi-app ekukhetheni kwezigqibo kuquka nesona sigqibo siphezulu. Kusenokwenzeka ukuba uzama i-imeyile kwi-albhamu yezithombe ngokwayo kwaye ukwi-3g (hayi i-wifi) u-Apple ukhetha ukunciphisa isisombululo sezithombe. Oko akunanto yakwenza neWatermark. Inayo into yokwenza nokukhethwa yi-Apple, i-ATT kunye nokwenza ubungakanani bebhendi ye-3G.
Q: Ndizisebenzisa njani iifonti ezivela kwi-iPhone / i-iPad okanye inguqulelo ye-iWatermark kwiMac Version?
A: Ukufumana iifonti ngaphandle kwe-iWatermark iPhone app kufuneka ufumane apho iapp ye-iPhone igcinwe khona kwi-Mac.
Kwi-iTunes, ipaneli yezicelo, lawula + ucofe iapp, kwaye ukhethe u- “Show in Finder”.
Iya kutyhila ifayile ebekwe apha:
IMacintosh HD> Abasebenzisi> * Igama lomsebenzisi *> Umculo> iTunes> Izicelo zeSelfowuni
kwaye iya kubalaselisa ifayile ebizwa ngokuba yiWatermark.ipa Xa idluliselwa kwiMac okanye kwiWin sisicelo seWatermark.
Khuphela le fayile. Iqhosha lokukhetha kwaye utsale le fayile kwi desktop ukuze uyikhuphele apho. kufanelekile ukuba ngoku ibe kukwincwadi yentsusa kunye nekopi kwi desktop yakho.
Guqula igama lokongezwa kwe desktop kwi .zip. ke ngoku kufanele ukuba kubizwe iWatermark.zip
Cofa kabini ukungazithembi. Ngoku uza kuba nefolda, ngaphakathi zezi zinto:
Cofa kwifolda ye-Payload emva koko lawula ucofe kwifayile ye-iWatermark kwaye uya kufumana imenyu yokudiliza apha ngasentla.
Cofa ku 'bonisa imixholo yePhakheji' kwaye ngaphakathi apho uya kufumana zonke iifonti.
Cofa kabini umgca ukuyifaka kwi-Mac.
Q: Ndikhetha 'Musa ukuvumela iWatermark ukufikelela kwiifoto' ngengozi. Ndiyivulela njani i-iWatermark?
AYiya kuseto: Imfihlo: iifoto kwaye ngaphakathi zivulela i-iWatermark.
Q: Ndiyishukumisa njani i-watermark?
A: Ukuhambisa i-watermark yichukumise kuphela ngomnwe wakho kwaye uyitsale naphi na apho ufuna. Ungabutshintsha ubungakanani befonti, isikali (usebenzisa isikhonkwane / ukusondeza) kwaye utshintshe i-engile (ukusonta kweminwe emibini) ngokuthe ngqo ngokubamba.
Q: Ngaba iWatermark idlula kulwazi lwe-EXIF ukusuka kwifoto yentsusa?
A: Ewe, nayiphi na isithombe esibonisiweyo osigcinayo kwiFoto Album okanye uthumela nge-imeyile unalo lonke ulwazi lwangempela lwe-EXIF kubandakanya ulwazi lwe-GPS.
Q: Ndinengozi endiyenzayo.
A: Inqabile kodwa ingozi inokuvela ngezizathu ezi-4 kwaye kukho izisombululo ezilula.
1. Ukhuphelo olubi apho kufanelekileyo ukuba ucime inguqulelo kwi-iPhone yakho / kwi-iPad yakho nakwi-iTunes okanye kwisixhobo se-Android emva koko uphinde uphinde uphinde ukhuphele.
2. Sebenzisa iifoto ezivela kwi-SLR ezizii-Megs ezili-10 okanye ngaphezulu ubukhulu. I-iWatermark ye-iPhone yenzelwe iifoto ze-iPhone kunye ne-iPad. Iyakusebenza kwezinye iifoto ezinkulu kodwa gcina engqondweni ukumiselwa kwememori kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS okwangoku.
3. Into eqhubekayo ngeefowuni OS. Qalela ngokutsha ukuze ubuyisele ifowuni kwimeko yayo engagqibekanga.
4. Akukho nkumbulo yaneleyo eshiyekileyo kwisixhobo. Isisombululo kukususa i-podcast, ividiyo okanye enye into okwethutyana.
Emva kokuba ukhangele kwaye wenze oku kungentla kwaye une-bug engaguqukiyo ndicela usazise Iinkcukacha zokuyivelisa kwakhona kwaye ukuba sinokuyivelisa kwakhona singayilungisa.
Q: Ndifuna ukusebenzisa utyikityo njengewatch ebonakalayo yeefoto zam. Ndiyongeza njani imizobo efana nemisayino kaPicasso, uBen Franklin, njl.
ANazi iindlela ezi-2:
Sebenzisa eyakhelweyo kwiSkena sokuSayina esikwimenyu yokuHlela xa ucofa u-Yenza iGrafic Watermark.
yenza imizobo kwikhompyuter yakho emva koko uthumele ifayile nge-imeyile, gcina le fayile iqhotyoshelweyo kwilayibrari yezithombe. Kuza kubakho kwilayibrari yezithombe ze-iPhones apho ungayifumana khona kwi-iWatermark ukuze ubukele iifoto zakho.
Nantsi inkcazo yala manyathelo:
Izinto ezibonakala elubala kufuneka zenziwe kwiPhotoshop ngolu hlobo:
I-1) dala ungqimba kwaye uzobe i-watermark kuyo (okanye unamathisele ngokulula)
2) umlingo ubugqwirha obukule mifanekiso yonke, emva koko ubetha ucime. Ushiywe ngumkhangeli webhodi emiselweyo oku
3) fihla ubume bangasemva
4) gcina njenge-PNG. Ukucaca akunakwenziwa nge .jpg kufuneka kube yifayile ye-.png.
Iinkcukacha ezithe kratya kulenkqubo zingezantsi.
Sebenzisa nayiphi na imizobo njenge-watermark. Ukuze usebenzise owakho utyikityo, okokuqala kufuneka uskene kutyikityo lwakho kwaye ke ucime imvelaphi. Ukuba utyikitye ngemvelaphi emhlophe oku kuya kuyicekisa inxalenye yomfanekiso wakho, i-watermark yesiginesha iya kujongeka njengebhlokhi emhlophe. Ukuqinisekisa ukuba ayenzeki beka utyikityo lwakho lweskena kumhleli wegraphic njenge-Photoshop (okanye eminye imhleli njengomhleli Gimp esimahla) vula utyikityo lwakho, susa imvelaphi emhlophe ngesixhobo somlingo uze ugcine ifayile njengefayile ye-.png. Kubalulekile ukuba ifayile yifayile ye-.png kuba ifayile ye-jpg ayivumeli ukuba nemvelaphi ebonakalayo.
le ikhonkco ikunika amanyathelo okwenza oku. apha zintlanu iindlela zokwenza oku. Unokuya nakwaGoogle wenze utyikityo olunemvelaphi ebonakalayo ukuze ufumane ulwazi ngakumbi.
Eyona ndlela ilula yokuyithumela kwi-iPhone yakho / kwi-iPad kukuthumela ngefayile nge-imeyile, vula i-imeyile emva koko ugcine ifayile eqhotyoshelweyo kwilayibrari yezithombe. Kukho ezinye iindlela kunye nezixhobo zokudlulisa imifanekiso kwilayibrari yezithombe kwi-iPhone. Kwi-Android ungagcina i-png yemizobo ethe ngqo kugcino lwefowuni.
Ke kwi-iWatermark wenza i-watermark yegrafiki kwaye usebenzise umfanekiso wakho otyikityayo (ukusuka kwisibhaliso sefoto se-iPhone) kwaye uyinike igama lakho. Unokuba nazo uninzi lwezi zisombululo ezahlukeneyo, ukujikeleza, imisebenzi, njlnjl. Kwaye unike igama ngalinye ukuba ulichaze.
Q: Isebenza njani iPhoto Stream? Ngaba ndongeza ifoto ku-Photo Stream endaweni yeRhamera yeRoll?
A: Oku kulawulwa ngu-Apple ngathi. Ulwazi ngakumbi kulapha.
Q: Ndizicima njani iisiginesha zomzekelo kunye iilogo ezinikezelweyo?
A: Khetha ifoto (ukwenza njengemvelaphi) emva koko ucofe kwimifanekiso ebonakalayo yewatch. Emva koko cofa kwi-watermark kwaye i-roller iya kuvela. Cofa uphawu -bomvu ukucima loo mzekelo.
Q: Ndilahle ifowuni yam kwaye kufuneka ndiphinde ndikhuphe kwakhona i-iPhone / iPad (okanye i-Android) toleo. Ngaba kufuneka ndihlawule kwakhona?
A: Hayi. Zombini ezi Ivenkile yeApple iTunes kwaye Google Play vumela uphinde uphinde uphinde uphinde ukhuphele iiaphulelo osele uzithengile kwaye imigaqo-nkqubo yazo ikulo makhonkco.
Q: Ngaba ikhona inguqulelo yeWatermark yeMac okanye yeWindows?
A: Ewe ziyafumaneka kwindawo yethu Apha. Banamandla kakhulu ngakumbi iWatermark Pro entsha ye-Mac. Ivumela ii-watermark ezininzi ngaxeshanye, isebenzisa inkqubo efanayo (FAST) kwaye ineziphumo kunye nokuguquguquka. Ilungele abafoti.
Q: Ukuba ndifuna ukusebenzisa iWatermark kuzo zombini i-iPad kunye ne-iPhone, ngaba kufuneka ndihlawule iiapps ezimbini okanye enye nje?
AAbanye babenzi beapp bafuna ukuba uhlawule kabini. Asazi. IWatermark efanayo isebenza kakuhle kwi-iPhone nakwi-iPad. Ngokusemthethweni ungumnini wazo zombini kwaye unokuba nesoftware yakho kuzo zombini. Kodwa nceda wenze abahlobo bakho ukuba bathenge enye okanye babeke uphononongo oluhle lweenkwenkwezi ezi-5 kwivenkile ye-iTunes ukusukela oko kuphela .99 kunye neapile ifumana isithathu sayo. Zombini ezo zinto zisinceda ukuba siqhubeke nokuvela, senze iinkqubo kunye nokuphucula usetyenziso.
OKUBALULEKILEYO: Ukutyikitywa kukaJohn Hancock, uBen Franklin, uGalileo yimizekelo nje yeewatch graphic. Zizityikityo zokwenene zaba bantu. Nganye yavavanywa ngaphakathi, yafakwa ekhompyutheni, yangasemva isuswe yagcinwa njengeefayile ze-.png. Ezi zibandakanyiwe ukuzonwabisa kunye nokubonisa okunokwenzeka. Sicebisa ukuba wenze utyikityo lwakho okanye usebenzise ilogo yakho kwiifoto zakho. Jonga ulwazi olukwi-Q & A apha ngasentla malunga nokuba uyenza njani kwaye uyisayine okanye uyisayine kwiWatermark. Ukuba awufuni ukwenza eyakho i-watermark yemizobo ungasoloko usenza ii-watermark zombhalo njengoko uzidinga.
Nceda usithumelele iingcebiso, iibhugi kwaye usixelele nje ukuba uyayithanda Apha. Sithumele isicatshulwa esifanelekileyo kunye nekhonkco kwindawo yakho. Ukuba unesithombe esihle kunye ne-watermark zikhululeke ukuthumela kunye. Singakuvuyela ukuva kuwe.
Sijoyine kwi-Facebook kwaye ufumane iindaba kunye nesigqebhezana sesaphulelo seMac okanye uguqulelo lweWindows kwiWatermark. Sebenzisa ideskithophu yakho ngokudibeneyo kunye ne-iPhone yakho okanye i-Android version yeWatermark.
I-iWatermark ifumene uphononongo lweenkwenkwezi ezi-5 koku Indawo yaseVietnam yokukhuphela kunye nokuHlola
Isikrini esihle kakhulu sokujonga kwakhona iWatermark kunye neWatermark + nguTabitha Carro
Le vidiyo ye-skrini evela kuPhylis Kare
Isikrini ngokwenza isigcawu
UKatherine Roussopoulos wenze le screencast enolwazi